चयन गरिएका कक्ष(हरू)का लागि वैधानिकता युक्त नियमहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।
उदाहरणका लागि , तपाईँं दायरा परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै : "Numbers between 1 and 10" वा "Texts that are no more than 20 characters" ।
चयन गरिएका कक्ष(हरू)का लागि वैधानिकता युक्त विकल्प क्लिक गर्नुहोस् ।
दिएका सर्तहरू उपलब्ध छन:
सीमा हुँदैन ।
होल सङ्ख्याहरू मात्र सर्तमा अनुरूप हुन्छन् ।
सबै सङ्ख्याहरू सर्तमा अनुरूप हुन्छन ।
सबै सङ्ख्याहरू अवस्थामा मिल्दोजुल्दो छ । प्रविष्टि गरिएको मानहरू पछिल्लो समयमा संवाद आह्वान गरिएको आधारमा ढाँचाबद्ध गरिएका छन् ।
एउटा कक्ष दायतामा दिइएको मानहरूलाई मात्र अनुमति दिनुहोस्. कक्ष दायरा छुट्टै पनि निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ, वा एउटा नामांकित डाटाबेस दायराको रूपमा, वा एउटा नामांकित दायराको रूपमा. दायराले कक्षहरूको एउटा स्तम्भ वा एउटा पङ्क्ति समाविष्ट गर्न सक्दछ. यदि तपाईँंले स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरूको एउटा दायरा निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ भने, पहिलो स्तम्भ मात्र प्रयोग गरिन्छ.
सूचीमा निर्दिष्ट मानहरू वा स्ट्रिङहरूलाई मात्र अनुमाति दिन्छ । स्ट्रिङ र मानहरू मिश्रित हुन पानि सक्दछन् ।सङ्ख्याहरू तिनीहरूको मान मूल्यांकन गरिन्छ त्यसकारण यदि सूचीमा सङ्ख्या १ प्रविष्टि गरेको खण्डमा प्रविष्टि १००% पानि वैध हुन्छ ।
सर्तमा अनुरूप गर्ने लम्बाइ जुन हो प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
कक्षहरू खाली गर्न अनुमति दिनुहोस् ।
चयन सूची देखाउनुहोस्
प्रविष्टिहरू बददो क्रममा क्रमबद्ध गर्नुहोस्
घट्दो क्रममा चयन सूची क्रमबद्ध गर्नुहोस् र सूचीबाट नक्कलहरू फिल्टर गर्नहोस् । यदि जाँच नगरेको खण्डमा डेटा स्रोतबाट क्रम लिइन्छ ।
कक्ष दायरा प्रविष्ट गर्नुहोस् जसले वैध मानहरू वा कक्षहरू समाहित गर्दछ ।
प्रविष्टिहरू प्रविष्टि गराउनुहोस् जसमा मानहरू वा पाठ स्ट्रिङहरू वैध हुनेछ ।
ले अनुमति दिनुहोस् बाकसमा डेटा वैधानिकता विकल्पका लागि न्यूनतम मान प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
ले अनुमति दिनुहोस् बाकसमा डेटा वैधानिकता विकल्पका लागि अधिकतम मान प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
Title is: मापदण्ड